Shirweynaha aaya ka talinta gobolka Hiiraan - BBC News Somali
Shirweynaha aaya ka talinta gobolka Hiiraan
Waxaa maalintii labaad magaalada Beledweyne ka socda shirweyne ay leeyihiin beelaha dega gobolka Hiiraan kaas oo ujeedka laga leeyahay uu yahay in nabad laga dhex dhaliyo beelaha ay colaaduhu dhexmareen mudadii dawlad la'aanta.
Waxaa kale oo ujeedada labaad ee shirka ay ku sheegeen qabanqaabiyayaashu in laga arrinsanayo mustaqbalka iyo aaya ka talinta gobolka Hiiraan.
Furitaankii shirkaasi waxa ka qaybgalay xildhibaano ka tirsan baarlamanka federaalka, saraakiil ka socotay maamulka gobolka Hiiraan, siyaasiyiin xilal horey uga soo qabtay dawladdihii dalka soo maray,wakiilo ka socday qurbo joogta ka soo jeeda gobolka iyo odayaal dhaqameedka beelaha.
Ammaanka shirka ayaa waxaa gacanta ku haya ciidamada ka socda wadanka Jabuuti ee qaybta ka ah hawlgalka AMISOM iyo ciidamada dawladda.
Weriyaha BBC Ibraahim Maxamed Aadan ayaa taleefanka Beledweyne kula hadlay Professor Axmed Muumin Warfaa oo kamid ah xubnaha shirkan soo abaabulay, wuxuuna marka hore waydiiyay halka uu shirku marayo.